လက်ပံတောင်း အနောက်က တရုတ်ကြေးနီစီမံကိန်းသစ် ခြေလှမ...
29 ก.ย. 2562 - 20:16 น.
အခုစက်တင်ဘာလအတွင်းကပဲလက်ပံတောင်းစီမံကိန်းနဲ့ မိုင်၂၀ လောက် အကွာမှာ တရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်က နောက်ထပ်သတ္တုစီမံကိန်းသစ်တစ်ခုစမ်းသပ်ရှာဖွေမှာကို ကန့်ကွက်ဖို့မရှိဘူးဆိုပြီး တိုင်းအစိုးရ ကပြည်ထောင်စု အစိုးရ ကကို သဘောထားပေးပို့လိုက်ပါတယ်။
ဒီဟာက စစ်ကိုင်တိုင်းအတွင်းမှာ တရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်က နောက်ထပ်သတ္တုစီမံကိန်းသစ်တစ်ခု အစပျိုးလာတာဖြစ်ပြီးတော့ ဒေသခံတွေက လုံးဝသဘောမတူတာကြောင့် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့မှာ ဆန္ဒပြဖို့လည်းရှိနေတယ် လို့လည်း သူကဘီဘီစီကိုပြောပါတယ် ။
အဲဒီကြေးနီစီမံကိန်းဟာ စလာမယ် ဆိုရင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြသနာ၊အလုပ်သမားပြသနာနဲ့လူမှုရေးပွတ်တိုက်မှုပြသနာများတွေ အများကြီး ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်း ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
"လက်ပန်းတောင်းနဲ့ မိုင်၂၀လောက် ဝေးတာကို တိုးချဲ့စီမံကိန်းလို့ပြောတာ သဘောမတူပါဘူး၊ ကျွန်မက အခု သူတို့ မျက်စိ ကျနေတဲ့ ဝါးစီမ်းတောင် ရွာသူ ပါ၊ ကွှန်မတို့ဒေသမှာ အဲဒီစီမံကိန်း ဝင်လုပ်လို့ရအောင် ပညာတတ်နဲ့လူတွေ မရှိတော့ အလုပ်အကိုင်တွေရမယိဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဖူး နောက်တစ်ခု က သူတို့စမ်းသပ်တယ်ဆိုတာတူးချင်လို့စမ်းသပ်တာလေ မတူးချင်ရင်စမ်းသပ်မှာမဟုတ်ဖူး "လို့ လည်း ဒေါ်အောင်မေရီကပြောပါတယ် ။
"ရှာဖွေတဲ့ သူတွေက ကျွန်မတို့ရဲ့ သယံဇာတတွေကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိသွားပြီဆိုရင် သူတို့က နောက် မဆုတ်ဘဲ ရှေ့ကို မရ ရတဲ့နည်းနဲ့ လုပ်တော့မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်မသဘောထား အရတော့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တစ် ယောက်ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အရ လွှတ်တော်ထဲကနေ တရားဝင် ကန့်ကွက်မယ်လို့ "လည်း ဒေါ်အောင်မေရီကပြောပါတယ် ။
"ဒေသခံတွေက ကတောတောင်တွေ မှီခိုပြီးလုပ်ကိုင်စားနေရတာ သူတို့ ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်မှာစိုးရိမ်တယ်။ စီမံကိန်းကြောင့်အလုပ်ရမယ်ဆိုတာကလည်းလက်ပံတောင်းတို့ စံပယ်တောင်တို့ကို ကြည့်လေ အားလုံးကို အလုပ်မပေးနိုင် ဘူး နောက်မျိုးဆက်အတွက်လည်း ဒေသမှာ ဘာမှ မရှိတော့မှာ စိတ်ပူကြတာပေါ့ "လို့လည်းဒေါ်အောင်မေရီကပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ လက်ပံတောင်း အနောက်က တရုတ်ကြေးနီစီမံကိန်းသစ် ခြေလှမ်း